Sida loo habeeyo mawduuca Gboard-ka ee Android | Androidsis
Sida loo habeeyo muuqaalka Gboard taleefankaaga Android
Eder Ferreno | | Codsiyada Android, Habee Android, Tababarada
Gboard wuxuu noqday kiiboodhka ugu caansan ee maanta loogu talagalay taleefannada Android. Bilihii la soo dhaafay, hawlo fara badan ayaa lagu dhex daray, kuwaas oo ka caawiyay inay ka dhigaan mid aad u dhameystiran. A muuqaalka cusub ee sabuuradda ama keyboard sabayn waa laba ka mid ah isbeddelada lagu soo bandhigay gudaha, u oggolaanaya in si fiican loo isticmaalo kumbuyuutarraddan ku jira taleefannadeenna. Awoodda aad u habeyn karto waa qodob kale oo xoog leh.
Tan iyo markii Gboard wuxuu noo ogolaanayaa inaan qaabeyno muuqaalkiisa qaab fudud. Sidan oo kale, waxay la jaanqaadi doontaa dhadhankeenna waxaanan lahaan doonnaa kumbuyuutar si buuxda loo habeeyay. Iyo tan ugu fiican, runtii way fududahay in la habeeyo muuqaalka kumbuyuutarka ee ku yaal Android. Maxaa inala gudboon
Waa mid ka mid ah khiyaanooyinka aan u adeegsan karno inaan ku helno khibrad adeegsade wanaagsan Gboard, sidaan horeyba kuugu soo bandhignay maalinteeda. Xaaladdan oo kale, waxa aan qaban doonno waa wax ka beddel mawduuca aan ku isticmaalno kumbuyuutarka. Sida caadiga ah waxay ku timaadaa midabka asalka ah, laakiin waxaan ku badali karnaa qaab aad u fudud. Marka haddii aad ku aragto qaabka kumbuyuutarka ee hadda socda mid caajis ah, dhib kuma yeelan doontid wax ka beddeliddiisa.
1 Wax ka beddel mawduuca Gboard
1.1 Qaab deg deg ah
1.2 Qaab dhaqameed
Wax ka beddel mawduuca Gboard
Waxaan leenahay labo wado oo aan ku gaari karno isbedelkan maadada ah kumbuyuutarka Sidaad u badan tahay inaad horeyba u ogayd, mowduucyadu waxay ku jiraan qaybta dejimaha ee dalabka. In kasta oo sida aan u adeegsan karno aan ku gaari karno ay ka duwan tahay. Laakiin waxaan ku tusaynaa labada dhinacba, si aad u doorato midka adiga kugu habboon.
Qaab deg deg ah
Haddii aad rabto inaad si deg deg ah u beddesho mawduuca ku dhex jira Gboard, maxaa yeelay qaabka kumbuyuutarka iyo habka loo tago dejimaha adiga kuma raaxeysanayaan, waxaan leenahay xeelad aad u fudud. Ugu horreyntii, waa inaad furtaa codsi Android ah oo aad u adeegsanaysid kumbuyuutarka (barnaamijyada farriimaha ama barnaamijyada xusuusinta, tusaale ahaan).
Marka la furo, waa inaad ku cadaadisaa badhanka comma (,) ilaa shan ilbidhiqsi, illaa menu cusub uu ka furmo shaashadda. Waxay si toos ah noo geyn doontaa goobaha arjiga, halkaas oo aan ka helno dhammaan qeybaha na xiiseynaya, oo ay ku jiraan mowduucyada, oo ah midka ay tahay inaan gujino kiiskan. Sidan ayaan mar hore ugu jirnaa qaybta ay tahay inaan isticmaalno.
Kadib waxaan u gali karnaa mowduucyada, sidaa darteed waxaan wax ka bedeleynaa mawduuca aan ku isticmaalno Gboard. Waxaan halkaa ku haynaa xulashooyin aan ku isticmaali karno kumbuyuutarka. Si fudud waa inaad doorataa midka adiga kugu habboon.
Marka lagu daro habkan degdegga ah ee loo beddelayo mawduuca, Gboard wuxuu na siiyaa habka caadiga ah ee lagu geli karo goobaha, halkaasoo ay ku taal qaybta mawduucyada. Si tan loo sameeyo, waxaan fureynaa barnaamij Android ah oo aan ku adeegsaneyno kiiboodhka. Marka aan kumbuyuutarka shaashadda ku hayno, dhagsii G ka soo baxa dhanka bidix, G ah midabada.
Markaad sidan sameyso, dhowr ikhtiyaar ayaa ka muuqda baararka sare. Waa inaan gujino saddexda dhibcood ee jiifka ah, oo ka muuqda dhinaca midig ee shaashadda. Markaan sidan yeelno, shaashadda xagga hoose waxaan ka heli doonnaa dhowr ikhtiyaar. Mid ka mid ah xulashooyinkaas ayaa ah dejinta. Kadibna waan gujineynaa.
Dejinta gudaheeda qaybo ka mid ah waxaan joognaa bilowgii waa dulucda. Marka waa inaan si fudud u galnaa. Qaabkan, waxaan awoodi doonnaa inaan wax ka beddelno dulucda Gboard. Halkaas waxaan ka helnaa dhowr ikhtiyaar, markaa waxaan doorannaa midka aan aad u jecel nahay. Sidaa darteed, waxaan horeyba u qaabeynay muuqaalka arjiga taleefankayaga Android. Aad u fudud in la sameeyo, sida aad arki karto.
Miyaad ka fikireysaa inaad ku bedesho teebabka Android? Soo ogow sida loo sameeyo iyo xulashooyinka ugu fiican ee la heli karo link this.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo habeeyo muuqaalka Gboard taleefankaaga Android